Webflow: Naqshadaynta, Nooca iyo Launch Dynamic, Shabakadaha jawaabta leh | Martech Zone
Webflow: Naqshadeynta, Nooca iyo Launch Dynamic, Shabakadaha jawaabta leh
Axad, Agoosto 14, 2016 Douglas Karr
Sameynta siliggu ma wax la soo dhaafay baa? Waxaan bilaabay inaan ka fikiro sidaa darteed mawjad cusub oo ah WYSIWYG bilaa sumad la'aan, tafatirayaasha jiidaya oo hoos u dhacaya ayaa hadda suuqa ku garaacaya. Nidaamyada Maareynta Mawduuca ee ku soo bandhigaya hal aragti xagga dambe-dhammaadka iyo mid kale xagga hore-dhammaadku waxay noqon karaan kuwo duugoobay. Haa… laga yaabee xitaa WordPress haddii aysan bilaabin inay qabtaan.
In ka badan 380,000 naqshadeeyayaal ayaa ku dhisay in ka badan 450,000 oo goobood oo leh Websaytka. Waa aalad naqshadeynta websaydhka ah, nidaam maarayn maaddo, iyo madal martigelinaysa dhammaantood hal mid. Tani waxay ka dhigan tahay in naqshadeeyayaashu ay si dhab ah u kobcinayaan koodhka isla markaa - natiijooyinkana si otomaatig ah loogu habeeyay qaabab jawaabayaal ah.
Astaamaha Webflow-ka waxaa ka mid ah:
Naqshadeeye aan sharciyeysneyn - Webflow wuxuu kuu qoraa nadiif, nambarka semantic ee adiga si aad diirada u saarto naqshadeynta. Ka bilow shiraac madhan oo loogu talagalay wadarta xakamaynta hal-abuurka, ama soo qaado shax si aad dhakhso ugu bilowdo. Qorshayaashooda mudnaanta leh, waxaad si fudud ugu dhoofin kartaa HTML-kaaga iyo CSS-kaaga si aad ugu isticmaasho sidaad jeceshahay.
Design Tixgelinta - Si fudud u dhis qaab u gaar ah oo loogu talagalay desktop, kiniin, iyo moobiil (muuqaal iyo sawir). Naqshad kasta oo isbeddel ah waxaad si toos ah ugu sameysid cascades aaladaha yaryar. La wareeg gacan ku haynta meel kasta oo jabisa, markaa bartaadu waxay u egtahay pixel-kaamil ah qalab kasta.
Animation iyo Isdhexgal - Keenso guji, duljoogsiga, iyo isdhexgalka culeyska nolosha adiga oo aan lahayn lambar koodhadh leh animations si habsami leh uga shaqeyn doona qalab kasta iyo dhammaan biraawsarrada casriga ah.
Qaybaha horay loo dhisay - Raadinta, isjiidka, tabs, foomamka iyo sanduuqyada laydhka waa kuwo horay loo sii dhisay, si buuxda wax uga qabta isla markaana ay ku jiraan awoodda qabashada hoggaanka iyo jawaab celinta sanduuqa.
Ganacsiga iyo Is-dhexgalka - Isku-darka wax soo saarka waxaa ka mid ah Zapier iyo Mailchimp. Dhis dhismahaaga hore ee dukaanka oo ku maamul gaadhigii wax iibsiga iyo lacag bixinta qalabka saddexaad sida Shopify.
habyaalada - Ka dooro wax badan 100 ganacsi, faylalka, iyo mawduucyada barta inaad ku habeyn kartid Webflow-ka dhexdiisa.
Marti gelinta iyo keydinta - Isticmaal domain caadadiisu tahay keyd otomaatig ah iyo mid gacanta ah, kormeerka amniga, kaydinta iyo keydinta macluumaadka, iyo xawaaraha culeyska bogga oo aad u sarreeya.
Casharrada - Webflow's Xarunta caawinta waxay bixisaa koorsooyin badan si aad u bilowdo iyo casharro qoto dheer oo kaa caawiya inaad banaanka u baxdo, oo ay weheliso kulan iyo aqoon isweydaarsiyo.
Saxiix Xisaab Webflow Free
Tags: sentimitirnooca ecommercenoocoodajawaabNaqshad wax ku ool ahNooca jawaabta ahTijaabinta tusmadadukaankaqulqulka webka